Maxkamadda ciidamada oo saaka 3 ruux ku toogatay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamadda ciidamada oo saaka 3 ruux ku toogatay Muqdisho
Mareeg.com: Maxkamada Darajada Koowaad Ee Ciidanka Qalabka sida Ee Soomaaliya ayaa waxaa ay saaka dil toogasho ah ku fulisay sadax qof oo la sheegay iney ahaayeen gacan ku dhiiglayaaal dad dilay.
Sadaxdaan ruux ee saaka la toogtay ayaa waxaa mid ka mid ah la sheegay inuu ka tirsanaa Alshabaab, halka labada kale ahaayee askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
Ragga la toogtay waey kala yihiin Ibraahim C/laahi Cali oo maxkamaddu sheegtay iney heshay diil uu u geystay wiil Filim-qaade ahaa oo lagu Magacabai jiray Sakariye Maxamed Maxamuud Macalin oo uu dhalay weriye ka tirsan Radio Muqdisho oo lagu magacaabo MM Macalim.
Wiilkaan la sheegay inuu Shabaab ka tirsanaa ayaa sidoo kale maxkamaddu sheegtay inuu dilay sidoo kale waxaa uu dilay Ex Dable Cali Mambuuq. Labada qoof ee la sheegay inuu wiilkan ayaa lagu dilay degmada Shibis ee gobolka Banaadir.
Aabaha dhalay Sarakariye Maxamed Maxamuud Macalin oo saaka goob joog ahaa goobta lagu toogtay gacan ku dhiiglihiui dilay wiilkiisa ayaa soo dhaweeyay Xukunka Maxkamadu fulisay isagoo sheegay in ay muuqato cadaalad iyo garsoor bulshadu ay isku haleyn karto.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka saaka la toogtay C/laahi Cartan Maxamuud oo 22 jir ah horayna uga tirsanaa Ciidanka qalabka sida Ee Soomaaliya kaas oo horay u dilay Axmed Cabdi raxmaan Shariif oo uu ku dilay Degmada Shibis Ee Gobolka banaadir.
Qofka saddexaad ee la toogtay ayaa lagu macaabi jiray Ex Dable C/fitaax Axmed Cabdi oo 29 jir ah oo isna ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Somalia horayna u dilay Maxamuud Xasan Maxamed.
Ergayga Qaramada Midoobay oo soo dhaweeyey caleema saarka madaxweynaha Koonfur Galbeed